Singasho ngokuqiniseka futhi ukuthi ingane ongazange kwadingeka ifilimu yezingane emangalisayo Soviet sika zefilosofi "Mayelana Little Red Riding Hood", walahlekelwa kakhulu. Umlando Cinematic Yany Poplavskoy, abadumile actress Russian nethelevishini umethuli, eqinisweni, yaqala nge indima Little Red Riding Hood. Ian Young sekubhekwa njengento owawina eU.SSR State Prize for indima ngo-1978.
Biography Yany Poplavskoy: ebuntwaneni
Le ntombazane wazalelwa ngoJuni 28, 1967 eMoscow emndenini wabantu zokudala - actress Eugenia Jurevny (izimpande Georgian) futhi intatheli Yevgeny Vasilyevich (Jewish). Ngiseyingane, wayengumhlali Hooligan esabekayo, waba nabangane abafana walithanda nje nakathathu zonke ukucasula kungenzeka esikoleni, ngoba yena Kaningi umbusi kwakufanele othi awube ngabazali bakhe.
Ukuze ngandlela-thile ukushweleza olunesivunguvungu bomoya indodakazi bese uthumela wakhe phezu emaphethelweni amandla ogelezayo, abazali wamnikela-Jan emidlalweni yesikole, futhi waqala ukufuna ukuzibandakanya yokuzijwayeza kwezobuciko. Futhi lapha ifinyelele ukuphakama ethile, baba nembangi inkosi ezemidlalo.
I sifisa actress kanye TV umethuli uyinkosi ngiba udokotela ohlinzayo ubuchopho, futhi kwakungenxa yokuthi ugogo wakhe, owayengomunye yena udokotela, babethi abesifazane neurosurgeons kakhulu, amancane kakhulu. Yan ngokuvamile yabe ugogo wakhe futhi wabukela njengoba uthola umsebenzi. Omunye udokotela ohlinzayo abasha ngisho ukusebenza kwenziwa - bathunga indlebe hamster, okuyinto yaklebhula cat, futhi simile kahle. Kodwa iphupho akuzange kube njalo, wenza izakhi zofuzo namanje iwine.
Biography Yany Poplavskoy: okokuqala ifilimu izifundo
Ndawonye nonina Jana elapha isethi eneminyaka engu iminyaka 4, kodwa intombazane esinhlanhlathayo wayengafuni ukudubula. Ngokuba ifilimu "Khumbula Igama Lakho" lapho Poplavskaya wayeneminyaka engamashumi 6 ubudala, umqondisi Kolosov wayebheke kumdlali ngoba indima umfana. Wasikisela Yana play, kodwa Yenqaba yaphetha, uthe ufuna kuphela intombazane. Umqondisi bavumelana, kodwa uma ufaka i siqephu Poplavskaya cut, at kudlalwé intombazane yena akazange abone futhi ecasulwa kakhulu.
DEBUT yakhe njengomdlali waseshashalazini kwaba lapho-Jan kwaba iminyaka engu-10 ubudala. Nakuba umama wakhe wayesebenza esikhumulweni Taganka Theatre, futhi yena okunenkanyezi "Crossroads" ukusebenza. Kodwa impumelelo yangempela beza kuye ne "Red Riding Hood", iyona Isenzakalo sokuqala esibalulekile, okubandakanya biography cinematic Yany Poplavskoy.
Umqondisi ifilimu wayebheke umdlali waseshashalazini ngoba indima ukuhola isikhathi esingaphezu konyaka, futhi zonke nalesikhathi wayesesimweni belulekwa ukususa nokuhlola Poplavsky, kodwa ubuka izithombe amantombazane, wenqaba. Futhi nje ekugcineni ngenxa yokungazi ukuthi ngenzeni, wagcina wavuma. Lapho eqeda "ezethula" inkulumo yakhe, wamthatha ezingalweni zakhe, azungeza ngala mazwi: "Ngiye ekugcineni wathola wena!" Le filimu yacala at actress abasha zigoqiwe udumo yangempela. Lonke izwe wayazi mayelana nokuthi ubani lo Yana Poplavskaya.
Ushadile actress eminyakeni 17 ngokuba umlingisi Sergei Ginzburg. bona Kodwa ahlukaniswe ngemva kweminyaka ethile beshadile 25. Poplavskaya namadodana amabili - Klim futhi Nikita. "Angisiboni isizathu sokuba kulondolozwe ubuhlobo ezinamasondo futhi ushayele umndeni wabo," - ngakho wathi mayelana isizathu yesehlukaniso -Jan Poplavskaja. Izingane manje ahlala nayo.
Little Red Riding Hood namuhla
Esikhathini arsenal Poplavskaya engaphezu kwengu-15 izindima movie, umsebenzi ngempumelelo esiteji. Manje usebenza njengoba uthisha ngaleso Higher School of Film and Television "Ostankino" futhi Faculty of Journalism eMoscow State University, noJan Poplavskaja - a yimpumelelo emsakazweni naku-TV umethuli.
Nakubhavu Acrylic: Izibuyekezo